Ogaden News Agency (ONA) – Caasimada Finland ee Helsinki oo Shir Balaadhan Lagu Qabtay Maanta.
Caasimada Finland ee Helsinki oo Shir Balaadhan Lagu Qabtay Maanta.
Posted by ONA Admin	/ June 13, 2015
Waxaa maanta ooy taariikhu tahay 13/6/2015 lagu qabtay caasimada wadanka Finland ee Helsinki shir balaadhan ooy sooqaban qaabisay Jaaliyada Somalida Ogadenya ee Finland. Shirkan oo siwanaagsan loosoo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay shacab aad utiro badan. Shacabkaas oo kasoo ay kamid ahaayeen walaalaha Somaaliyeed iyo Somalida Ogadenya ayaa buux dhaafiyay goobtii shirku asocday. Waxaa kaloo siwayn ooga muuqday madasha shirku kasocday ururka OYSU iyo ururka Haweenka Ogadenya (UHO) oo qayb libaax kaqaatay hirgalinta shirka.
Ujeedada oogu wayn ee shirkan loosoo agaasimay ayaa ahayd in bulshada Soomaaliyeed ee kudhaqan wadanka Finland lagu baraarujiyo dhibaatooyinka baahsan ee Gumaysiga Itoobiya uu kuhayo ummadda Somaaliyeed meeshay doontaba hajoogtee taasoo ay oogu dambaysay gumaadkii lagu xasuuqay bulshada rayadka ah ee kudhaqan degmooyinka kuteedsan xadka Jamhuuriyada Somaliya iyo wadanka Ogadenya ay wadaagaan. Dhibaatooyinka ay Itoobiya shacabka Somaliyeed kuhayso ayaa isasoo taraya mudooyinii lasoo dhaafay taasoo kicisay dareenka indheer garadka soomaaliyeed dal iyo dibadba.
Waxaa kulankan khudbado iyo warbixino aad uqiima badan kasoo jeediyay madax sarsare oo kamid ah Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO). Mudane Riyaale Xaamud iyo Mudane Xasan Macalin ayaa lawadaagay shacabkii shirka kasoo qaybgalay warbixino kusaabsan xaalada Gumaysiga Itoobiya uu wakhtigan xaadirka ah kusuganyahay iyo sideey Itoobiya usii kala yaacayso iyadoo cagta saartay wadadii burburkeeda.
Shirkan oo ujeedadii loosoo agaasimay laga gaadhay ayeey aad oogu diirsadaan kasoo qaybgaleyaashii madasha joogay. Waxaa maalinta bari ah haduu ilaahay yiraahdo kulamo gaar ah wada qaadan doona waftiga JWXO iyo Hawlwadeenka Jaaliyada Somalida Ogadenya ee Finland. Jaaliyada Finland ayaa xidhiidh wanaagsan oo dhaw la leh guud ahaan shacabka Somaliyeed ee kudhan wadanka Finland. Ururada bulshada ee Somalida Ogadenya sida OYSU iyo UHO ayaa barnaamij badan oo iskugu jira bandhig faneed, hido iyo dhaqan iyo siminaaro kala duwan kusoo bandhigay magaalada Helsinki.